တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ - Worldwide Church of God Switzerland
“ လူတိုင်းကမင်းကိုမျှော်လင့်တယ်၊ မင်းကသူတို့ကိုအချိန်တန်အစာကျွေးတယ်။ လက်တော်ကိုဖွင့ ်၍ သင်တို့၏သတ္တဝါများကိုပြည့်စေတော်မူ၏။ ” (ဆာလံ ၁၄၅၊ ၁၅-၁၆ HFA) ။ တခါတရံကျွန်ုပ်အတွင်း၌တစ်နေရာရာမှငတ်မွတ်နေသည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုလေးစားဖို့နဲ့ခဏလောက်ဖိနှိပ်ဖို့မကြိုးစားဘူး။ ရုတ်တရက်အားလုံးသည်ပြန်ပေါ်လာသည်။ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်ရှိုင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်လိုသောဆန္ဒ၊ ဆန္ဒရှိမှုအကြောင်းပြောနေသည်။
“လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံရာအရပ်၌ ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိ၍ ဥယျာဉ်၌ အဘယ်သူမျှမမြှုပ်ထားဖူးသော သင်္ချိုင်းအသစ်တစ်ခုရှိ၏” ဟုယောဟန် ၁၉:၄၊1. သမ္မာကျမ်းစာသမိုင်းတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် အခိုက်အတန့်များစွာသည် အဖြစ်အပျက်များ၏ သဘောသဘာဝကို ထင်ဟပ်နေပုံရသည့် နေရာများတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသခင်ထားရှိသည့် လှပသောဥယျာဉ်တစ်ခုတွင် ပထမဆုံးအခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့...
ချာ့ချ်သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးသူသည်ပြည့်ဝစုံလင်စွာနေထိုင်သည်။ အလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။ ဖက် ၁း၂၃ ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနိုင်ငံတခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုသေချာစေရန်စစ်ပွဲတွင်အမြင့်ဆုံးသောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူများကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းသတိရမိသည်။ သတိရခြင်းသည်ကောင်း၏။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ဘုရားသခင့်အကြိုက်ဆုံးစကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြစ်ကိုသတိပြုမိရန်အမြဲသတိပေးနေသည်။
"ငါသည်သူ့ကိုငါ့လက်၌ယူခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင်toသရေလအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့ပြုသောအမှုများကိုငါ့ထံမှငါပယ်ရှင်းသည် ဖြစ်၍ နားမလည်သေး။ ” - ဟောရှေ ၁၁: ၃ ။ ငါကိရိယာတန်ဆာပလာအမှု၌တိတ်တဆိတ်သွားနေစဉ်၊ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကစီးကရက်အဟောင်းကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပွင့်လင်းစွာဖြတ်တောက်နိုင်သဖြင့်အကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်createdရိယာကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အချက်သုံးချက်ပါသော plug နှင့်ပုံဆွဲရန်မည်သို့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့…
“ ထို့ကြောင့်၊ ကောင်းကင်ခေါ်တော်မူခြင်း၌ပါဝင်သောသန့်ရှင်းသောညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့ဝန်ခံသောတမန်တော်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းယေရှုခရစ်ကိုကြည့်ရှုကြလော့” (ဟေဗြဲ ၃း၁) ။ လူအများစုကခရစ်စမတ်သည်ညံ့ဖျင်းသောစီးပွားဖြစ်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုလက်ခံကြသည်။ အစားအစာ၊ ဝိုင်၊ လက်ဆောင်နှင့်ပွဲတော်များကိုအလေးထားသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာကျင်းပသလဲ? ခရစ်ယာန်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားအဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သင့်သည် ...
“ဘုရားကိုမသိတဲ့ သာသနာပလူတို့လို အချည်းနှီးသော စကားလုံးတွေကို တွဲမတင်သင့်ပါဘူး။ စကားများများပြောရင် ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ မင်းအဖေက မင်းလိုအပ်တာကို မင်းအဖေသိလို့ လုပ်ပေးတယ်၊ သူ့ကိုမမေးခင်" (Mt 6,7-8 NGÜ)။ တစ်ခါက လူတစ်ယောက်က “အရာအားလုံးကို သိတော်မူတဲ့အခါ ဘုရားသခင်ထံ ငါ ဘာကြောင့် ဆုတောင်းရမှာလဲ” ဟု မေးခဲ့ဖူးသည်။ သခင်ယေရှုသည် အထက်ဖော်ပြပါစကားကို သခင်ဘုရား၏ဆုတောင်းချက်ကို နိဒါန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို သိသည်။ သူ့စိတ်​ဓာတ်​က ​နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်​....
“ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်မတိုင်မီကပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများအား ပရောဖက်များမှတစ်ဆင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယခုမူကား၊ ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌၊ ဘုရားသခင်သည် သားတော်အားဖြင့် ငါတို့အား မိန့်တော်မူ၏။ သူ့အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး အရာအားလုံးအပေါ် အမွေခံအဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သားတော်၌ ခမည်းတော်၏ ဘုန်းတော်သည် လုံး၀ဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သောကြောင့်” (ဟေဗြဲလူတို့အားပေးစာ၊ 1,1-3 HFA)။ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များသည် ထိုကဲ့သို့သော စကားလုံးများကို အသုံးပြုကြသည်...
"မင်းကိုငါမခိုင်းချင်ဘူး၊ မင်းကိုမစွန့်ခွာချင်ဘူး" လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့လို့ပါပဲ (ဟေဗြဲ ၁၃၊ ၅) ။ ငါတို့လမ်းကိုမမြင်ရလျှင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြသနည်း။ ဘ ၀ တွင်ဖြစ်ပေါ်စေသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲဘဝကိုဖြတ်သန်း။ မရနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံယင်းတို့သည်မခံနိုင်လောက်အောင်များပြားသည်။ ဘ ၀ သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မတရားမှုရှိပုံရသည်။ ဘာကြောင့်အဲလိုပြောရတာလဲ ငါတို့သိချင်တယ်။ အများကြီးခန့်မှန်းရခက် ...
“တကယ်တော့ ကယ်တင်ခြင်းခံရတာက ဖြူစင်တဲ့ ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ ဘုရားသခင်က မင်းကို ပေးတဲ့အရာကို ယုံကြည်ဖို့ကလွဲလို့ မင်းကိုယ်မင်း လုပ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူး။ ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့ မထိုက်တန်ဘူး။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိရှေ့တော်၌ မိမိအောင်မြင်မှုများကို အဘယ်သူမျှမရည်ညွှန်းလိုပေ” (ဧဖက် 2,8-9 GN)။ ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “မေတ္တာသည် မိမိအိမ်နီးချင်းကို မထိခိုက်စေ၊ ထို့ကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပညတ်တရား၏ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်” (ရော. ၁3,10 ဇူးရစ်ခ်ျကျမ်း)။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ငါတို့က...
“အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၏ပသခါသိုးသငယ်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် ခရစ်တော်ကိုသတ်ခြင်းဖြစ်သည်” (1. ကော။ 5,7) ဘုရားသခင်က အစ္စရေးတွေကို ကျွန်ဘဝကနေ လွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4000 နီးပါးလောက်က အီဂျစ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြီးကို ဖြတ်ကျော်မသွားချင်ပါဘူး။ ဘေးဒဏ်ဆယ်ပါး 2. မောရှေသည် ဖာရောဘုရင်အား ခေါင်းမာခြင်း၊ မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်အား မာနထောင်လွှားခြင်း၌ တုန်လှုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပသခါပွဲသည် နောက်ဆုံးနှင့် တိကျသော ပလိပ်ရောဂါဖြစ်သည်..။